Wellisaan Naayijeeriyaa Murtiin Du’aa Itti Murame Akka Gad Dhiisamu Gareen Mirga Namaa Tokkummaa Mootummootaa Gaafate
Fulbaana 28, 2020
Gareen ogeessota dhimmi mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa angawoonni Naayijeeriyaa faaarfataa musliima dargaggeessa wallee arrabsoo qabu wellies jechuun du’a itti murteessan akka gad dhiisan waamicha dabarsee jira
Yaayyaa Shariif Amiinuu kutaa Kaanoo gama kaabaatii kan dhufe wellisaa muuziqaa wangeelaa fi miseensa Suufii Tijaaniyaa ta’uu isaa komiishina walabummaa kan Ameerikaan beeksisamee jira. Weellisaan umuriin waggaa 22 app Watsap irratti garee Tijaniyaa kan Muslim brotherhood (Ibrahim Niasse) keessaa Imaama tokko akka malee ol ol qabee faarsuu dhaan nabi Mohammediin caalsisee galateeffate jedha gabaasi komiishina walabummaa amantii sadarkaa addunyaa kan Yunaayitid Isteetis.
Ogeessonni dhimma mirga namaa addaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti namoonni siyaasaa naannoo Sanaa akka inni ajjeefamuuf erga gaafatanii Bitootessa 4 booda mana maatii Shariif Amiinuu guban.
Ogeessonni kun akka jedhanitti dhimmi Shariif Amiinii adeemsa mana murtiin qabamuu dhiisuun kan isaan yaaddesse ta’uu ibsuu dhaan bakka namni hin arginetti hidhamuu isaaf yakka ilaalchi isaa jalqabaa irratti abukaatoo argachuu dhabu isaa itti dabaluun ibsanii jiran. Hayyuu tokkummaa mootummootaa keessaa tokko kan ta’anii fi dame
aadaaf barreessituu gabaasa addaa kan ta’an Kariimaa Benoonee gama isaaniin hojii aartii ilaalchisee wallee interneetii irratti maxxansuu isaan adabi du’aa itti muramuun seera mirga namaa kan sadarkaa addunyaa akkasumas heera Naayijeeriyaa kan cabsuu dha jedhan.
Hayyonni kun murtiin Shariif Amiinuu irratti murame akka haqamu akkasumas angawoonni Naayijeeriyaa ennaa inni ol iyyannaa dhiyaaffatu nageenya isaa akkasumas adeemsa seeraa jiruuf wabiin akka jiraatu waamicha dabarsaniiru.